Koobka wadamada Afrika ee kubadda cagta yaa isku aadan - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Koobka wadamada Afrika ee kubadda cagta yaa isku aadan
Koobkii 31aad ee Qaramada Afrika ee wadamada Afrika ayaa caawa Saacada Geeska Afrika ka furmey marka ay tahay 7pm dalka Gabon oo martigelinaya koobka iyo xulka ku cusub koobka ee Guinea-Bissau.
Lixdan sannadood ayaa laga joogaa tan iyo markii la ciyaaray koobkii ugu horeysay ee Qaramada Afrika oo ka dhacay dalka Sudan sannadii 1957dii, iyadoo kaliya ay ka qeyb galeen seddex wadan, waxaana ku guuleysatay Masar.
Sannadkan waxaa la ciyaaraya 32 kulan oo socon doona in ka badan 23 maalmood iyadoo ay ka qeybgalayaan 16 xul, waxaana loo kala qeybiyay afar group oo min afar xul ka kooban, waxaa tartanka la soo gabagabeyn doonaa 5ta bisha Feberwari markaasoo xulka ku guuleysta uu sarre u qaadi doono koobka lagu soo sameeyay Talyaaniga iyo lacag 4 milyan doolar oo abaalmarin ah.
Qaarada Afrika oo idil ayaa isha ku heysa koobka ugu weyn qaarada, iyadoo tartanka sannadkan ee 2017 uu yahay mid la sugayo isku darka waxyaabo lama filaan ah, waxyaabo taariikhi noqdo iyo weliba soo bandhigis wacan.
Gabon ayaana caawa dib u soo dhaweyneysa Koobka Qaramada Afrika oo ay kaliya shan sannadood ka hor la martigeliyeen wadanka Equatorial Guinea.
Gabon ayaa bedelka Libya lagu abaalmariyay inay martigeliyaan koobka Qaramada Afrika iyadoo Libya ay ku qorneyd inay martigeliso 2013 balse dagaalo awaadeed ayaa Gabon Ekwroriyal gini iyo South Afrika loo kala bedelay waqtiga martigelinta iyadoo South Afrika ay martigelisay sannadkaas halka Libya ay ku qorneyd sannadkaan 2017.
Dagaalka sokeeye ee ka socda Libya ayaana la micno noqday inay gabi ahaanba isaga baxaan tartanka, waxaana booskooda buuxisay Gabon.
Dalalka Ka Qayb Galaya Waa
HORDHACA KULANKA FURITAANKA EE GABON V GUINEA -BISSAU
Kulankii furitaanka ee caawa ayaa wadanka Gini bisaw iyo dalka martida loo yahay ee Gaboon at isku mari waayeen 1 iyo 1 halka Burkino Faso at iyadna barbaro la gashey Kamaruun.